UGoogle ufuna ukusombulula zonke iingxaki zokudibanisa | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi Uphando unenjongo entsha engqondweni kwaye, njengenye yeenkampani ezenza olona tyalo-mali kuphando nakuphuhliso lweetekhnoloji ezintsha, ngeli xesha banomdla kuleyo, njengomntu, isenendlela ende ekufuneka beyihambile ukuze bakwazi ukwenza ukusetyenziswa kwayo. Njengoko isihloko sale posi sitsho, sithetha malunga fusion yenyukliya.
Phambi kokuba uqhubeke, ndingakuxelela ukuba into eqondwa ngumntu wonke namhlanje njenge-fusion yenyukliya, ngokuqinisekileyo ngaxa lithile okanye elinye uvile ngoluhlobo lwamandla, nokuba kukwindaba, kumaphephandaba ..., inyani kukuba sihlala siphambanisa amagama amabini kwaye, ngokuchanekileyo into esiyiqondayo njengokuhlanganiswa kwenyukliya ayikho enye into ngaphandle kokuqhekeka kwenyukliya, Iinkqubo ezimbini ezichaseneyo noko kunokubonakala zahluke ngokupheleleyo.
1 Ukuhlanganiswa kwenyukliya kunye nokuchithwa kwenyukliya ziindlela ezimbini ezahlukeneyo zokufumana amandla
2 UGoogle ufuna ukusombulula zonke iingxaki zokudityaniswa kwenyukliya ngokwenza ialgorithm
3 IGoogle kunye neTri Alpha Energy bajoyina imikhosi ukuzama ukuqhubela phambili kwicandelo lokudibanisa inyukliya
Ukuhlanganiswa kwenyukliya kunye nokuchithwa kwenyukliya ziindlela ezimbini ezahlukeneyo zokufumana amandla
Ukuze uqonde umahluko phakathi kokudibana kwenyukliya kunye nefission yenyukliya, xelela ukuba izityalo namhlanje esinakho ukukhupha kuzo amandla ezinto ezisebenza nazo Ukulwa kwenyukliya. Ngokuqhekeka kwenyukliya, amandla afumaneka kwi-nucleus enzima eqhushumbe ngeeutron. Ndiyabulela koku, ayizinzanga kwaye ngenxa yayo Ukubola kubini. I-nuclei eyilahliweyo inoxanduva lokukhupha isixa esikhulu samandla.
Ngokwenxalenye yayo, i-fusion yenyukliya ichasene, oko kukuthi, sisenzo apho ii-cores ezimbini ezikhanyayo ziyahlangana ukuze zenze uzinzo olunzima. Le manyano yezi zinto zimbini zibangela ukukhutshwa kwamandla amakhulu. Umzekelo wolu hlobo lwenkqubo kunye namandla anokuveliswa yilelanga lethu.
UGoogle ufuna ukusombulula zonke iingxaki zokudityaniswa kwenyukliya ngokwenza ialgorithm
Nje ukuba sicacise iyantlukwano phakathi kwetekhnoloji esiyisebenzisayo namhlanje esiphanda ngayo izazinzulu ezininzi, ndifuna ukuthetha nawe malunga noGoogle, inkampani yetekhnoloji ethe yagqiba kwelokuba icwangcise injongo entsha kolu hlobo lophando, ngenxa yoko, bayafuna phuhlisa ialgorithm ekwaziyo ukufumana isisombululo kuzo zonke iinkqubo ezivela nezenzululwazi ezingenampendulo yazo.
Uluvo abanalo kuGoogle kukusombulula zonke iingxaki ezivelayo xa bezama ukuvelisa amandla nge-fusion yenyukliya, itekhnoloji esaphuhlayo kwaye, ukuba isetyenziswa ngakumbi, iphandwa kwaye yavavanywa, kokukhona iingxaki zibangela, iingxaki yenzelwe oososayensi abasebenza kuyo abanangcaciso, ubuncinci okwangoku. Yiyo kanye le nto uGoogle afuna ukusombulula ngokusetyenziswa kwekhompyuter.
Ukufezekisa iinjongo zayo, uGoogle usandula ukubhengeza isivumelwano sokusebenzisana kunye nenkampani Amandla ka-AlphaInkampani yaseMelika eseFoothill Ranch (California) eyasekwa ngonyaka ka1998 ukuphuhlisa zonke iintlobo zobuchwephesha ezingavumela abantu ukuba basebenzise i-fusion yenyukliya. Le nkampani inembali ende apho sifumana inani elikhulu lamalungelo abenzi abhekisa kolu hlobo lwenkqubo.
UGoogle kunye Amandla e-Tri Alpha ajoyina imikhosi ukuzama ukuqhubela phambili kwicandelo lokudibana kwenyukliya
Ngale ntsebenziswano yenzelwe ukukhawulezisa ukuqhubela phambili kokudibana kwenyukliya, luhlobo lwamandla oluthi, nangona lungahlaziyeki, luzinze ngakumbi kunolo silwenzayo namhlanje ngokutshisa izibaso, ekufuneka songeze kuzo ukuba yenza amandla ombane ngakumbi kunezinye iintlobo zobuchule ezinje ngefission yenyukliya ekhankanywe apha ngasentla.
Yenye yeendlela abantu ekuya kufuneka ukuba bavelise amandla amaninzi ngexabiso eliphantsi, into enokusinceda ngokuchanekileyo ukufezekisa ukukhula okuzinzileyo ngaxeshanye notshintsho oluya kwiifom ze sifumane amandla ombane avuselelekayo noqoqosho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » UGoogle ufuna ukusombulula zonke iingxaki zokudityaniswa kwenyukliya
I-Aura yikhibhodi entsha yeNewskill kubadlali bebhola
Le bhodi yezitshixo ifuna ukuphelisa lonke ulawulo endlwini